डलरको मूल्य इतिहासकै उच्च, ११५ रुपैयाँ नाघ्यो ! - Everest Dainik - News from Nepal
डलरको मूल्य इतिहासकै उच्च, ११५ रुपैयाँ नाघ्यो !
काठमाडौं, भदौ २१ । अमेरिकी डलरको मूल्य आज (बिहीबार) पनि वृद्धि भएको छ । आज १ अमेरिकी डलरको नेपाली बजार मूल्य १ सय १५ रुपैयाँ ११ पैसा पुगेको छ । यो अहिलेसम्म कै महंगो हो ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले विहीबारका लागि एक अमेरिकी डलरको खरिद दर १ सय १४ रुपैयाँ ५१ पैसा तथा बिक्रिदर १ सय १५ रुपैयाँ ११ पैसा तोकेको छ । भारतसँगको स्थिर विनिमय दरका कारण भारतीय मुद्रा कमजोर हुँदा त्यसको प्रभाव नेपाली मुद्रामा पनि पर्ने गरेको छ ।
याे पनि पढ्नुस २५ वर्षमा नेपालीको प्रतिव्यक्ति आय १२ हजार डलर !
ट्याग्स: Dollar, Nepali Rs, डलरको मूल्य उच्च